नायक दिलिप रायमाझीकी छोरी दिब्या चलचित्रमा डेब्यू गर्दै ! फिल्म नखेल्दै सुन्दरताको चर्चा – Gazabkonews
नायक दिलिप रायमाझीकी छोरी दिब्या चलचित्रमा डेब्यू गर्दै ! फिल्म नखेल्दै सुन्दरताको चर्चा
काठमाडौं । लोकप्रिय नायक दिलिप रायमाझी पछिल्ला दिनमा अभिनय यात्रामा फेरी एक पटक सक्रिय बनेका छन् । दर्पण छायाँ, जिन्दगानी, मितिनी, लगायतका बहुचर्चित फिल्म खेलेर लामो समय चर्चा बटुलेका अभिनेता दिलिपकी छोरी दिब्या भने अहिलेसम्मको उनको बाटोमा हिँडेकी छैनन् ।
अर्थात अहिलेसम्म अभिनय यात्रामा देखिएकी छैनन् । दिलिपकी छोरी चलचित्रमा आउने हल्ला नचलेको भने होइन । नेपालका चर्चित अभिनेता अभिनेत्रीका सन्तानहरु समेत आजकाल नेपाली चलचित्र क्षेत्रमा देखिन थालेको ट्रेण्डकै आधारमा उनी पनि चलचित्रमा हात हाल्दैछिन् भन्ने खबर एकताका भाइरल नै बन्यो । तर उक्त हल्ला अहिलेसम्म हल्लाकै रुपमा रहेको छ ।
दिलिपकी छोरी पछिल्ला दिनमा सामाजिक सञ्जालमापनि निक्कै अपडेट हुन थालेकी छिन् । सुन्दरताको हिसावमा चर्चित नायिकाहरुलाई पनि मात खुवाउँन सक्ने दिव्यालाई धेरैले फिल्म खेलाउँन अफर गरिसकेको विश्स्त स्रोत बताउँछ । हाल अध्ययनका लागि अमेरिकामा रहेकी दिव्याले कुन फिल्म मार्फत डेब्यु गर्छिन त्यो भने समयले देखाउला । यसअघि अभिनेता शिवहरि पौड्यालको फिल्ममा दिव्याले काम गर्ने कुरा भएको थियो ।